Save The Date - Myanmar Network
Posted by Hsu Thet Htar Kyaw on May 13, 2019 at 9:52 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Save The Date ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယ်အချိန်မှာသုံးသလဲ?
Save The Date သည် Remember The Date နဲ့အသုံးအနှုန်းဆင်ပါတယ်၊
A save-the-date isabrief invitation that's usually sent asapostcard to alert your guests that they are invited to your wedding, Birthday Party, what the date and location will be, and that you'll be in touch in the future with more details.
Save The Date ဆိုတာ အကျဉ်းချုပ်ဖိတ်ကြားအသိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်၊ များသောအားဖြင့် post card နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဧသည့်သည်တွေကိုဖိတ်ကြားတယ် မဂ်လာဆောင်ပွဲပဲဖစ်ဖြစ်မွေးနေ့ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့စွဲရယ် နေရာရယ် ညွှန်းပြီးဖိတ်တယ် နီးလာရင်တော့ details information နဲ့ဖိတ်ကြားမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်၊
Save The Date ကို မဂ်လာဆောင်ဖိတ်စာတို့ မွေးနေ့ဖိတ်စာတို့ လို့ Cards လေးတွေနဲ့ ဖိတ် ကြားရပါတယ်
ဒါကြောင့် Save The Date Card လို့ ခေါ်ပါတယ်
Save The Date Card မှာ ဘယ်လို Brief Information ထည့်ရလဲ?
Wedding အတွက်ဆို သတို့သား သတို့သမီးနာမည် ရယ် နေ့ရက်ရယ် နေရာရယ် လောက်ပဲပါမယ်
Birthday Invitation နဲ့ Save The Date Birthday (Invitation နဲ့ Save The Date) ဘာကွာခြားလဲ?
Save the Date Cards are sent approximately 4-6 months before your wedding or birthday party or event : invitations are sent 4-6 weeks before.
Invitation ဆိုတာ အနီးကပ်မှ ဖိတ်ကြားတာ ဥပမာ မဂ်လာဆောင်ဖို့ 6/8 ပတ် အလိုမှာ ဖိတ်ကြားတယ် Detail Information အစုံအလင်ပါတယ် (Invitations are sent6to 8 weeks before wedding)
Save The Date ဆိုတာ 4/5/6လ အလို က ဒီနေ့ငါ့ မဂ်လာဆောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိပေးခြင်းမျိုးပဲ Brife Information ပဲ ပါမယ် (Save The Date Cards are sent 4-6 months before wedding)
Save The Date Cards ကို ပို့ပြီးရင်တော့ Invitations will be sent soon ဆိုပြီး Invitation cards ကို ပွဲနီးလာရင် ထပ်ပို့ကျ ပါ တယ်
Save The Date နဲ့ Save The Day ကရော ဘယ်လိုကွာခြားလဲ? ??
Save The Day ဆိုတာ Situation အခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့နေရာသုံးတယ် နေ့ရက်ကို ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ပါဘူး
ဆိုးရွားတဲ့ ကိစ္စ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေကို အကောင်းဆုံး ဇွဲမလျော့ ကြိုးစား ခဲ့ပြီး မှ နောက်ဆုံးရလဒ်က အောင်မြင်မှု တွေ နဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့ အခြေ အနေကို သုံးတဲ့ Idiom တစ်ခု ဖြစ်တယ်
Save The Date ဆိုတဲ့ စကားစုကို ဘယျအခြိနျမှာသုံးသလဲ?
Save The Date သညျ Remember The Date နဲ့အသုံးအနှုနျးဆငျပါတယျ၊
Save The Date ဆိုတာ အကဉျြးခြုပျဖိတျကွားအသိပေးလိုကျခွငျးဖွဈတယျ၊ မြားသောအားဖွငျ့ post card နဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ဧသညျ့သညျတှကေိုဖိတျကွားတယျ မဂျလာဆောငျပှဲပဲဖဈဖွဈမှေးနပေ့ါတီပဲဖွဈဖွဈ နစှေဲ့ရယျ နရောရယျ ညှနျးပွီးဖိတျတယျ နီးလာရငျတော့ details information နဲ့ဖိတျကွားမယျလို့ ဆိုလိုပါတယျ၊
Save The Date ကို မဂျလာဆောငျဖိတျစာတို့ မှေးနဖေိ့တျစာတို့ လို့ Cards လေးတှနေဲ့ ဖိတျ ကွားရပါတယျ
ဒါကွောငျ့ Save The Date Card လို့ ချေါပါတယျ
Save The Date Card မှာ ဘယျလို Brief Information ထညျ့ရလဲ?
Wedding အတှကျဆို သတို့သား သတို့သမီးနာမညျ ရယျ နရေ့ကျရယျ နရောရယျ လောကျပဲပါမယျ
Birthday Invitation နဲ့ Save The Date Birthday (Invitation နဲ့ Save The Date) ဘာကှာခွားလဲ?
Invitation ဆိုတာ အနီးကပျမှ ဖိတျကွားတာ ဥပမာ မဂျလာဆောငျဖို့ 6/8 ပတျ အလိုမှာ ဖိတျကွားတယျ Detail Information အစုံအလငျပါတယျ (Invitations are sent6to 8 weeks before wedding)
Save The Date ဆိုတာ 4/5/6လ အလို က ဒီနငေ့ါ့ မဂျလာဆောငျရှိတယျဆိုတဲ့ အသိပေးခွငျးမြိုးပဲ Brife Information ပဲ ပါမယျ (Save The Date Cards are sent 4-6 months before wedding)
Save The Date Cards ကို ပို့ပွီးရငျတော့ Invitations will be sent soon ဆိုပွီး Invitation cards ကို ပှဲနီးလာရငျ ထပျပို့ကြ ပါ တယျ
Save The Date နဲ့ Save The Day ကရော ဘယျလိုကှာခွားလဲ? ??
Save The Day ဆိုတာ Situation အခွအေနတေဈခုကိုဖျောပွတဲ့နရောသုံးတယျ နရေ့ကျကို ကိုယျစားပွုတာမဟုတျပါဘူး
ဆိုးရှားတဲ့ ကိစ်စ ဆိုးရှားတဲ့ အခွအေနကေို အကောငျးဆုံး ဇှဲမလြော့ ကွိုးစား ခဲ့ပွီး မှ နောကျဆုံးရလဒျက အောငျမွငျမှု တှေ နဲ့အဆုံးသတျရတဲ့ အခွေ အနကေို သုံးတဲ့ Idiom တဈခု ဖွဈတယျ